China uqhaqho imaski Ukwenziwa kunye Factory | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
1.Umgangatho webanga lotyando, unyango olunyibilikisiweyo lwelaphu.
2. Le mveliso inokukhuselwa okungcono kwemigangatho emithathu kunye nokusebenza kokukhusela, kuthintela ngokufanelekileyo amasuntswana ebacteria.
3. Ukuthintela ngokufanelekileyo ukusasazeka kwegazi, ulwelo lomzimba kunye nokutshiza ngexesha lotyando.
4. Isikrini sokucoca ulwahlulo olunemigangatho emininzi sinokucoca ulwelwesi ngobunono kwaye sikonwabele ukuphefumla ngcono.
5. Imigangatho emithathu yelaphu engalukwanga, ukunyibilika okunyibilikisiweyo kunye nelaphu elingenasiphako esikhumbeni lisebenza kwaye likhuselekile kukhathalelo.
6. Ukuxhathisa okuphefumlayo okuphantsi, ukusebenza komoya okucociweyo okuphezulu, okusongiweyo ukwenza indawo yokuphefumla enamacala amathathu, ngaphandle kweendlebe.
7. Uyilo lokuguqulwa kobuso lufaneleke ngakumbi, kwaye uyilo lobuso obuninzi lwonyusa ubuhle.
8. Uyilo olubophelelayo kwicala leplastikhi yempumlo engabonakaliyo intle kakhulu!
Le mveliso yintsholongwane ye-ethylene oxide kwaye ifanelekile abasebenzi bezonyango kunye nabasebenzi abanxulumene nayo, bembethe indawo ezibhedlele, ezikolweni, kwiiyunithi, kwiindawo zokuthenga nakwiindawo zikawonkewonke.
Kufanelekile ukukhuselwa okusisiseko kwabasebenzi bezonyango okanye abanxulumene noko, kunye nokukhuselwa ekusasazeni kwegazi, ulwelo lomzimba kunye nokutshiza ngexesha lotyando. Inqanaba lokhuselo liphakathi kwaye linendlela ethile yokukhusela yokuphefumla. Inxitywe ikakhulu kwindawo ecocekileyo nenqanaba lokucoceka le-100,000 okanye ngaphantsi, isebenza kwigumbi lokusebenza, abaguli abagulayo abanomzimba omncinci wokuzivikela, kunye nokwenza imisebenzi yokugqobhoza umzimba. Iimaski zoqhaqho lwezonyango zinokuthintela uninzi lweebacteria kunye nezinye iintsholongwane, kuthintela abasebenzi ukuba bangosuleleki, kwaye kwangaxeshanye kuthintele ukukhutshwa ngokuthe ngqo kwezinto ezincinci eziphethwe ngumoya wabasebenzi bezonyango, oko kusisisongelo kwizigulana ezenziwa utyando. Iimaski zoqhaqho zonyango zifuna ukusebenza ngokuhluza okungaphezulu kwama-95% kwintsholongwane. Iimaski zonyango ezilahlwayo kufuneka zikhutshwe kwizigulana zokuphefumla ukuthintela usongelo losulelo kwabanye abasebenzi basesibhedlele kunye nokunciphisa umngcipheko wosulelo olunqamlezileyo.
Iindidi ze: Iimaski zonyango Eyabantu: Abasebenzi bezonyango okanye abanxulumene noko
Umgangatho: YY0469-2004 Inqanaba lokucoca: 99%
Indawo yemveliso: Iphondo le-Hebei Igama lebrand: Uthando lunako
Umzekelo: Ibhedi yendlebe Uhlobo lweentsholongwane: I-ethylene oxide
ubukhulu: 17.5 * 9.5cm Isiqinisekiso Somgangatho: Ngaba
umgangatho wokhuseleko: 0469-2011 imask yokuhlinzwa Igama lemveliso: Ezilahlwayo imaski yotyando zonyango
1. Sebenzisa imaski ukugubungela ngononophelo umlomo kunye nempumlo kwaye uzibophelele ngokuqinileyo ukunciphisa umsantsa ophakathi kobuso nemaski;
2. Xa usetyenziswa, kuphephe ukubamba imaski-emva kokuchukumisa imaski esele isetyenzisiwe, umzekelo, ukususa okanye ukucoca imaski, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi okanye usebenzise isicoci sesandla esinxilisayo;
3. Emva kokuba imaski ifumile okanye ingcoliswe kukufuma, nxiba imaski entsha ecocekileyo neyomileyo;
4. Musa ukuphinda usebenzise iimaski ezilahlwayo. Iimaski ezilahlwayo kufuneka zilahlwe emva kokusetyenziswa ngakunye.
1. Iimaski zonyango ngokubanzi kufuneka zitshintshwe emva kweeyure ezi-4 zokusetyenziswa kwaye azinakuphinda zisetyenziswe; kwaye ukuba nje ulahla inkunkuma phantsi kwaye ungachukumisi abanye abantu, ungabeka imaski kwindawo engena umoya, eyomileyo necocekileyo, okanye uyibeke kwindawo ecocekileyo. , Kwingxowa yephepha elingena umoya ukuze iphinde isetyenziswe.
2. Xa ubeka imaski, kungcono ukuyigcina ngokwahlukeneyo kwaye ubonise umntu oyisebenzisayo ukuthintela abanye ukuba bangayithathi kwaye bayisebenzise ngempazamo, babangela umngcipheko wokosuleleka.
3. Kwiimaski zoqhaqho lwezonyango, isibulali-zintsholongwane, utywala, njl. Njl. Azinakusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane, kwaye nangaphezulu akunakuhlanjwa ngamanzi. Emva kokusetyenziswa, zifake engxoweni okanye kumgqomo wenkunkuma kwiimaski zonyango.
4. Kwiimaski zelaphu lomqhaphu, sinokucoca kunye nokubulala iintsholongwane. Ukuba kunokwenzeka, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe ukukhanya kwe-ultraviolet kwintsholongwane.
Egqithileyo Indlebe imaski imvelaphi inyuselwa khona
Okulandelayo: Impahla yokukhusela